Caruurta keligood dalka yimaada oo lagu xiro xarumaha dadka waalan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tvångsåtgärder, Rättsspykiatriska kliniken, Öjebyn
Caruurta keligood dalka yimaada oo lagu xiro xarumaha dadka waalan
La daabacay måndag 2 februari 2015 kl 13.07
Caruurta qaxootiga ah ee keligood dalka timaada ayaa lagu xareeyaa xarumo qasab loogu siiyo daryeel caafimaad.
Waayadii hore tiro aan ka badnayn boqolkii 2,5 ayaa aheyd dhallinyarada keligood qaxootinimada dalka ku yimaada ee sida qasabka ah loogu siiyo daryeelka caafimaadka xaruumaha daryeelka qasabka ah. Balse sannadkii 2012kii dhallinyarada qasab lagu siiyo daryeelka caafimaadka ayaa boqolkii 10 noqdey dhallinyarada qaxootinimada dalka ku imaata.
Qiimeyn ay arrintan ku sameysay hey'adda qaabilsan daryeelka qasabka ah sannadkii 2014kii, ayaa muujinaya in shaqaalaha ka howlgala xaruumaha daryeelka qasab ka ah ay u arkaan in waaxda adeega bulshada (Socialtjänsten) ay caruurtan qaxootiga ah ugu meelayaan xarumahan sababo aan qayaxnayn marka loo barbardhigo caruurta dalka ku kortay. Sidoo kalena shaqaalaha ayaa u arka in waaxda adeega bulshada aysan ku baxinin daadaal u dhigma oo ay dhllinyaradan ugu helaan wax dhaama xaruumaha daryeelka qasabka ah.
Allan Mare, waxay madax ku xigeen ka tahay xarunta dhallinyarada lagu daryeelo ee Bärby ungdomshem oo ku taala Uppland, aad ayeyna u dhaleeceysan tahay wax ka qabadka arrinkan ee waaxda adeega bulsahda.
- Xaruumahan waa aduun xiran oo xoriyadda xadidantahay. Mana jiro cid ay u fiican tahay haddii laga maarmi karo. Mararka qaar waxaan la kulanaa dhallinyaro keligood dalka yimid oo halkan lagu soo xiray, iyada oo aysan cadeyn sababta iyo dhibaatada heysata midkoodna.
Hey’adda qaaabilsan daryeelka qasabka ah (SiS) ayaa sheegtay in aysan sidaas u badnayn dhallinyrada keligood dalka timaada ee sida qaldan xarumahooda loogu soo xiro, laakin heyadda ayaa qabta in ay haboonaan la heyd in waaxda adeega bulshada arrimahan uga shaqeyso si ka duwan sida ay hadda uga shaqeeyso.